वस्त्र विकास नीतिको आवश्यकता | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण वस्त्र विकास नीतिको आवश्यकता
on: २० कार्तिक २०७५, मंगलवार ०६:१२ लेख | दृष्टिकोण
वस्त्र विकास नीतिको आवश्यकता
हरेक मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि वस्त्र उद्योग एउटा महŒवपूर्ण आधार स्तम्भका रूपमा रहेको हुन्छ । त्यसैले बुद्धिमान् मुलुकले यो उद्योगको विकासमा हरसम्भव प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । हामीकहाँ भने वस्त्र उद्योगको उज्ज्वल सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस उद्योगको विकासमा चरम हेलचक्र्याइँ हुने गरेको छ । परिणामस्वरूप मुलुकले भारी मात्रामा वस्त्रक्षेत्रका वस्तु आयात गरिरहेको छ । विगत १० वर्षमा वस्त्र तथा वस्त्रबाट बन्ने वस्तुहरूको आयातमा औसत वार्षिक वृद्धिदर करीब १३ प्रतिशत रहेको छ । यही क्रम जारी रहेमा आगामी १० वर्षमा यसको आयात करीब रू. ८८ अर्ब पुग्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त वस्त्र उद्योगलाई चाहिने कपडाका अतिरिक्त जिपर, फास्नर, टाँक, सियो, मेशिन, रङ आदिको आयातको अर्को क्षेत्र पनि अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएको छ । नेपालको वस्त्रक्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने सेवाको आयातको पाटोलाई पनि यहाँ बिसर्न हुँदैन ।
परन्तु उपर्युक्त तीन पक्षको मिहीन अध्ययन र विश्लेषणविनाका टुक्रे पहलहरूका वरिपरि मुलुकको सिँगो वस्त्रक्षेत्रमा गतिहीनता व्याप्त छ, जसको समाधानमा चारैतिर चरम अन्योल रहेको छ । अकर्मण्यताका कारण मुलुकको वस्त्रक्षेत्र कुहिरोको कागजस्तै भएको छ ।
सफल मुलुकमा वस्त्र विकासको प्रयास
विकसित मुलुकका वस्त्र विकास नीतिहरूलाई अध्ययन गर्दा त्यसमा तीनओटा पाटा विद्यमान रहेको पाइन्छ । विकसित देशहरूमा समग्र वस्त्रक्षेत्रको उन्नयनका लागि (१) जोड दिएका क्षेत्रहरूको विकास (प्रविधिको स्तरोन्नति, उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तर सुधार, कच्चापदार्थको आधार वृद्धि, उत्पादन विविधीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन, वित्तीय व्यवस्थापन, रोजगार सृजना र जनशक्ति विकास), (२) क्षेत्रगत विकासका पहलकदमीहरू (कच्चापदार्थ– कपास, ऊन, रेशम, जुट, अल्लो, प्राकृतिक रेशा, मानव निर्मित रेशा), कताइ,, बुनाइ, तुनाइ, पावरतान, हातेतान, आधुनिक मिल, कार्पेट, पोशाक (हस्तकला र मेशिन निर्मित) (आन्तरिक माग, बाह्य माग), रसायन, मेशिनरी, एक्सेसरिज, टाँक, जिपर, फस्नर, इलाष्टिक र ग्लास विड तथा (३) सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग (कानूनी, वित्तीय, प्रवद्र्धनात्मक, विशेष दर्जाको व्यवस्था, भौगोलिक सङ्केत) मार्फत वस्त्रक्षेत्रको विकासमा यथोचित समानुपातिक प्राथमिकता प्रदान गरिएको पाइन्छ ।
कच्चापदार्थ, रेशा, धागो, कपडा, पोशाक, आन्तरिक माग पूर्ति र निर्यात वस्त्रक्षेत्रको स्वाभाविक गमनपथ हो । परन्तु नेपालमा भने उपर्युक्त क्षेत्रको विकासमा हालसम्म कुनै पनि प्रकारको पहलकदमी नै हुन सकिरहेको छैन । अन्धाले हात्ती छामेभैंm गरी टुक्रे र आवधिक सक्रियताका आधारमा चमत्कार गर्ने अनौठो कोरा प्राज्ञिक बहसमा सीमित गरिएको छ, यस क्षेत्रको उन्न्नयनलाई । नेपाल मात्र विश्वको एउटा यस्तो देश हो, जहाँ रेशा उत्पादनको कुरा गर्नु निषिद्ध कर्मका रूपमा लिइने गरिन्छ जब कि वस्त्र उद्योगको पहिलो खुड्किलो नै रेशा उत्पादन हो । वस्त्र उद्योगका तीनओटा गतिवर्धन चक्रहरू (रेशा, कपडा र पोशाक) हुन् । परन्तु यो गतिवर्द्धन चक्रलाई अङ्गीकार गर्न कोही पनि उत्सुक दैखिँदैनन् । अस्वाभाविक गमन पथमा हिँड्दाका परिणाम अमेरिकी कोटा प्रथा खारेज हुँदा साथ नेपालको तयारी पोशाक उद्योग धराशयी हुन पुगेको तथ्य हाम्रासामु जगजाहेर नै छ । परन्तु कच्चापदार्थ, रेशा, धागो र कपडा उद्योगको जग नबसाली तयारी पोशाक क्षेत्रको विकास हुन्छ भने अप्राप्य आशामा सिङ्गो मुलुक कुदी रहेको छ ।
नेपाली वस्त्र उद्योगमा उल्टो पिरामिड
प्रस्तुत वस्त्र पिरामिडमा कच्चापदार्थ न्यून प्राथमिकतामा परेको प्रष्ट छ । कच्चापदार्थ भन्दा रेशा अलि बढी प्राथमिकतामा छ । एवम् रीतले सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा निर्यात प्रवद्र्धन छ । आधार कमजोर भएकाले पूरै पिरामीड असन्तुलित छ । यस असन्तुलित पिरामिड माथि बसेर वस्त्र विकासमा लागि गरिने सबै प्रयास असन्तुलित हुन्छन् । आधार कमजोर बनाएर टुप्पामा बसी वस्त्रक्षेत्रको विकास गर्ने कोरा ज्ञान भएका उन्मार्गीहरूका कारण यो क्षेत्र यसै कारण धराशयी हुने दिशामा अग्रसर भइरहेको छ ।
वस्त्र उद्योगमा सहायक उद्योगहरू (टाँक, जिपर, मेशिनरी), रङ उद्योग, जनशक्ति विकास तथा अनुसन्धान र विकास गरी चारओटा स्तम्भ हुन्छन् । परन्तु यी स्तम्भ तयार गर्ने विषयमा पनि चरम उदासीनता व्याप्त छ ।
वस्त्र उद्योगका लागि करमुक्ति र भन्सारदरहरूबाट स्वदेशी वस्त्र उद्योगको संरक्षण गरिनुपर्ने हुन्छ । परन्तु यस विषयमा पनि कुनै पहलकदमी हुन नसक्दा वस्त्रक्षेत्र छानो नभएको घरजस्तो भएको छ ।
स्वदेशी वस्त्र उद्योगलाई विश्वका अन्य मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुभवयोग्य अनुदान तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०१७ मा मात्रै कपास कृषकका लागि १ अर्ब १० करोड यूएस डलर अनुदान वितरण गरेको विषयबाट त हामीले केही शिक्षा लिनुपर्ने हो । परन्तु यस विषयमा पनि कुनै पहल हुन नसक्दा नेपाली वस्त्र उद्योग आडविहीन कमजोर अवस्था रहेको छ ।
वस्त्रक्षेत्रलाई साच्चैकै गतिशील क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने हो भने सर्वप्रथम उल्टो पिरामिडलाई वर्गमा परिणत गर्नुपर्छ । कच्चापदार्थको उत्पादनमा रहेको लगानी न्यूनतालाई पूर्ति गर्न अनुदानसहित कच्चापदार्थ उत्पादनकर्तालाई विशेष संरक्षण गरिनुपर्छ । यसैगरी रेशा, धागो र कपडा उत्पादन, रङ उद्योग, सहायक उद्योगहरूमा रहेको लगानी न्यूनतालाई पूर्ति गर्न पनि संस्थागत, आर्थिक, प्राविधिक र उत्प्रेरणात्मक सहयोग हुनु जरुरी छ । विशेष गरी यस्ता उद्योग स्थापनामा उद्यमीहरूलाई महसूस हुने गरी प्रत्यक्ष अनुदान, प्रोत्साहन र संरक्षण पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । वस्त्र उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कम्तीमा भारतले अङ्गीकार गरेका नीति हामीले पनि अङ्गीकार गर्नुपर्छ । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकले रू. १६ अर्बबराबरका तयारी पोशाक मात्र आयात गरेको थियो । यो आन्तरिक बजारको मागलाई पूरा गर्ने खालको तयारी पोशाक उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि नेपाली तयारी पोशाक उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारको विशेष सहयोग आवश्यक छ ।
सारांशमा भन्नुपर्दा नेपाली वस्त्रक्षेत्रको साच्चै विकास गर्ने हो भने सरकारको सबैभन्दा बढी लगानी कच्चापदार्थको उत्पादन र वस्त्र उद्योगको आधुनिकीकरणमा हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कृषक र वस्त्र उद्यमीहरूलाई दान, मान र अनुदान, भन्सारदर तथा करमुक्तिजस्ता औजारहरूबाट संरक्षण गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । वस्त्र उद्योगमा स्थापित देशहरूले यस क्षेत्रको विकास गर्न प्रयोग गरेको सूत्र पनि यही हो । यो स्वभाविक गमनपथमा हिँड्न नेपाल सरकार र निजीक्षेत्र मन, वचन र कर्मले तयार हुनुपर्छ । अन्यथा वस्त्र उद्योगको विकास केवल प्राज्ञिक बहसमा मात्र सीमिति हुने निश्चित छ ।
Thanks for ur article and I am 100% agreed with ur views, Ramesh gadia me Noble textile parwanipur